सागर परियारका कलिला आँखा आफ्नी आमाको प्रतीक्षामा… « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » सागर परियारका कलिला आँखा आफ्नी आमाको प्रतीक्षामा…
सागर परियारका कलिला आँखा आफ्नी आमाको प्रतीक्षामा…
२०७३ पुस १८, जागरण मिडिया सेन्टर
यहाँ जो आउँछन्,
यहाँ जो बस्छ,
यहाँबाट जो जान्छ,
पोल्टाभरि निभेका विश्वासहरू र सपनाहरू सोहोरेर जान्छ
यो चार भन्ज्याङ खाल्डो ।
भूपि शेरचनले ‘चिसो एस्ट्रे’ शीर्षकमा लेखको यो कविता र सागर परियारको आँखा उस्तैउस्तै लाग्छ मलाई ।
विगत केही दिनदेखि सागर परियार र उनका दुई कलिला भाइहरु मुटुभरि आगो र ओठभरि ज्वाला बोकेर हिँडिरहेका छन् आमाको हत्याबारे ‘बकपत्र’ बाँड्न । थाहा छैन, यो लाजमाण्डौ सहरका प्रख्यात महिला अधिकारवादीहरु कुन पाँचतारे होटलमा आधी अंग्रेजी र आधी नेपाली भाषामा भाषण गर्दैछन् । कार्यपत्र पेस गर्दैछन् । सोधपत्र बुझाउँदैछन् । हत्केलाभरि खरानी र आँखाभरि धूवाँ बोकेका ‘परियार’ यो सुकिलो समाजको परिवार होइन क्यारे ।
म तिनका नितम्बहरुलाई चरम घृणा गर्छु ।
मुक्ति, न्याय, समानताको भजन गाएर नथाक्नेहरु मुसा बनेर लुकेका छन् । यही कामना गर्छु, ती मुसहर बस्तीमै पसून् । कम्तीमा कसैको पेट भरिनेछ । बाँकी जो छन्, तिनलाई हेलिकप्टरबाटै खसाल्नुपर्छ । संसार रोएको बेला दलित अधिकारकर्मीहरुको हातमा एक थान जाले रुमालसम्म देखिन्न । पोल्टाभरि निभेका विश्वासहरू र सपनाहरू बोकेर लक्ष्मी परियारका कलिला सन्तानहरु यही चार भन्ज्याङ खाल्डोमा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।
एउटा चिसो एस्ट्रेजस्तो, चार भन्ज्याङ !
मैले परेवाहरु देखेको छु । परेवाका बचेराहरु देखेको छु । मैले ढिकुर चराहरु देखेको छु । ढिकुर चराका बचेराहरु देखेको छु । मैले लक्ष्मी परियार देखेको छु । लक्ष्मी परियारका बचेराहरु देखेको छु । आँखा नखुलेका ती कलिका परेवाका बचेराहरु कति निर्दोष देखिन्छन् । एक दाना चारो टिप्न हम्मेहम्मे हुने ढिकुरका बचेराहरुको प्वाँख कस्तो मायालाग्दा देखिन्छन् ।
त्यस्तै देखें मैले सागर परियारको आँखा, सुमन परियारको अनुहार र सुशील परियारको आँसु ।
सागर परियारका कलिला आँखा आफ्नी आमाको प्रतीक्षामा हजारौं वर्ष अनिँदो बिताएको जस्तो अतृप्त सम्झना बोकिरहेको देखिन्थ्यो । सुमनको मुख सुकिरहेको थियो । सुशील काखको दुधे नानी, रातभरि रोएर हजुरआमालाई सुत्न नदिने । आमा…आमा…भन्दै निरन्तर बोलाइरहने उनको घाँटीमा पीडाको ध्वनि गुन्जिरहेको थियो ।
गुलेली लागेर मुर्छित परेवाजस्तै, पासोमा परेको ढिकुर चराजस्तै लक्ष्मी परियार यो जगतबाट धेरै टाढा पुगेपछिको हृदयविदारक चित्र हो यो ।
सुशीलले लगाएको भोटोबाट आमाको दूधको गन्ध आइरहेको थियो । पिसाब फेरेर जाङ्गे पूरै भिजेको थियो, शायद केही घण्टादेखि जाङ्गे नफेरिएको हुन सक्छ । टिलपिलटिल आँखाहरु शायद उनी रुँदारुँदै थाकिसकेका थिए । रुँदारुँदै थाकेको मानिसको मुहार कस्तो हुन्छ, त्यो मैले जीवनमा धेरै पटक देखेको छु- ऐनामा ।
सुशीलको मुहारमा दुई थोपा आँसु भिज्ने गरी म्वाइ खाएँ र करुणाको मधुरो आवाजलाई छातीभित्रै पूरपार गरेँ । मेरो दिलमा मानवीयता यसरी जाग्यो कि म मरिसकेको रहेनछु ।
दुई भाइलाई त कम्तीमा आमा बितेको थाहा थियो । उनीहरुले आफूलाई टुहुरो जीवनसँग अभ्यस्त बनाउन कोसिस गर्दैथिए । आमाले हामीलाई टुहुरो बनाएर गए भन्ने तिनलाई हेक्का थियो । कक्षाकोठामा सामाजिक विषय पढाउने आफ्नै शिक्षकले आमालाई बोक्सीको आरोपमा मारेको कुरा कम्तीमा ती जान्दथे । र, आमाबिनाको जिन्दगी बाँच्ने संकल्प गरिसकेका थिए मनमनै ।
तर, बिचरा कान्छा सुशील, केवल आमाको काखको खोजीमा रोइरहेको, उनी कराइरहेका थिए । उनलाई आफू टुहुरो भइसकेको अनुमान थिएन ।
आमालाई दिसा खुवाएर छातीमा लात्ती हानिएको, टाउकोमा चिर्पट दाउरा प्रहार गरिएको पीडाको घाउ उनी जान्ने/बुझ्ने भएपछि बल्झिएला । अहिले बल्झिएको छ, उत्पीडनको घाउ, विभेदको घाउ, अन्याय/अत्याचार र हेलाहोचोको घाउ । मनको घाउ, मुटुको घाउ, हृदयको घाउले भन्दा निकै चर्को दुखाएको छ यो विभेदको घाउले । वर्षौंदेखि यो घाउ सहँदै, रुँदै ‘दमिनी भीरबाट’ हजारौँ दमिनीहरु हामफालेका छन् ।
कुवाको पानी र आकाशको सूर्यले पनि विभेद गरेको छ ।
काभ्रे सानो वाङथली–७ की लक्ष्मी परियारलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेर मारेको खबर पढेपछि म बाँचेको युगसँग चरम ‘घृणा’ जागेको थियो मलाई । लक्ष्मीको पाशविक हत्यामा संलग्नहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने आशयको एउटा लेखेको थिएँ, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होला कि भनेर । जागरुकताको दृष्टिले मैले राम्रै भूमिका खेलेको कुरा विभिन्न माध्यममार्फत जानकारी हासिल गरेँ ।
लक्ष्मीका सन्तानप्रति स्वाभाविक रूपमा करूणा जाग्यो ।
तर, दयामाया र करूणा आफ्नो ठाउँमा थियो । स्व. लक्ष्मी परियारलाई न्याय दिलाउने, बालबच्चाहरुको पालनपोषण र उनीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिने कुरा अर्को ठाउँमा थियो । आरोपित हत्याराप्रति आक्रोशको भावना जाग्यो तर मैले एउटा नाथे लेख प्रकाशित गराउनबाहेक अरु केही गर्न सक्दिनथेँ । आमाको हत्या प्रकरणबारे मानवअधिकारवादी र पत्रकारहरुसँग प्रत्यक्षदर्शी छोरा सागरले दिएको बकपत्र भिडियोमा हेरेपछि धेरै दिनसम्म मन रोइरह्यो ।
दालभात पनि राम्रोसँग खाइनँ । कतिपय अवस्थामा अनिदोजस्तै रात बिताएँ ।
मानिसहरु मलाई अराजक केटा भन्ठान्छन् । तर, म यति धेरै भावुक किन छु, त्यो मलाईबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन । त्यसैले शंका लाग्छ आफ्नो भावुकतामाथि । मेरो दिमागमा आक्रोश छ, छातीभरि मायाको पोका पनि छ । मेरो मुखमा रुखो वचन छ, आँखामा बलिन्द्र धारा आँसु पनि छ । शायद यिनै मूल्यवान चिजलाई फ्युजन गर्न नसक्दा यो जिन्दगानी बारपाकजस्तै भताभुंग भएजस्तो लाग्छ ।
अन्याय, अत्याचारविरुद्ध संघर्ष गर्नकै लागि मेरो दिमागमा कसैले इन्द्रजाल मन्त्र घुसाइदिएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ ।
लक्ष्मी परियारको सत्ता निर्माण गर्नको लागि रगत बगाएको हो, पानी होइन । यो युगले सागर, सुमन र सुशीललाई मानिस बनाउने संकल्प बोकेको थियो । मुक्तिका लागि नयाँ समाज र नयाँ समाजका लागि नयाँ नेपाल । के हाम्रो महान सपना होइन ? के समताको बाटोमा मान्छेको मूल्य भेटिँदैन ? यस्तै धेरै कुराहरु सोचिरहेँ ।
कल्पना गरिरहेँ- उनीहरुलाई अलिकति भए पनि आफ्नो तर्फबाट केही गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो होला । के गर्न सक्छु त म ? म को हुँ ? मैले आफूले गर्न सक्ने सहयोगको सम्भाव्यता पहिल्याउन थालेँ ।
फेसबुकमा रहेका मित्रहरुलाई आह्वान गरेर २ लाख संकलन गर्छु भन्ने अठोट गरेँ । कम्तीमा २ लाखले उनीहरुको सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग हुन्छ, तत्कालका लागि भन्ने लाग्यो । किनभने, उनीहरुको पारिवारिक आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ भन्ने थाहा थियो । लक्ष्मी घाइते हुँदा उपचार गर्ने काठमाडौं आउने पैसा थिएन भन्ने समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए । मिलापत्रको बाध्यता थियो ।
भैँसी मारिदिएको र त्यसको जरिवाना तिर्न नसकेको झुटा आरोपले निकै पीडा दिन्छ ।
मैले फेसबुकमार्फत सहयोग संकलन गर्दा उनीहरु (बालबच्चा) सानो वाङथली–७ स्थित आफ्नै सानो घरमा थिए । बाबा पनि अनुसन्धानको लागि हिरासतमा रहेकाले उनीहरुलाई हजुरआमा र काकाको सहारा थियो । सामाजबाट अरु कसैले सहयोग गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने स्थानीय एक युवासँगको संवादबाट थाहा पाएको थिएँ ।
मैले उनीहरुलाई दरबारमार्गको केएफसीमा लगेर गएँ । खाना त जहाँ खाए पनि हुन्थ्यो । सस्तो दालभात जहाँ पनि पाइन्थ्यो तर मैले बच्चाहरुलाई नयाँ अनुभव दिन चाहन्थेँ । उनले आफ्नो तनावलाई कम गर्न सकून् र हाम्रो पनि कोही आफन्त रहेछन् भन्ने महसुस गरून् । उनीहरु निराश र हतासमा थिए, जुन स्वाभाविक थियो ।
केएफसीबाट निस्कने बेला उनीहरुको मुहारमा उज्यालो छायो । ओठमा मुस्कान देखियो । केही तस्बिरहरु खिच्यौं । एकछिन वरिपरि घुम्यौं र गयौं सपिङको लागि- सिटी सेन्टर ।
सिटी सेन्टरमा क्रिसमसको रमझम थियो । मानिसहरुको भीडभाड पनि उत्तिकै । उनीहरु क्रिसमस ट्रिनजिक उभिएर रमाइलो गरे । झिलिमिली देखेर खुसी भए । लिफ्ट चढेर उपल्लो सबै तलामा गए । आफूलाई मन परेका कपडाहरु हेरे, किने ।
२ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य भए पनि ऋण नदिएकाले घोषणा गरेका मित्रहरुलाई पटक-पटक मागिरहने नैतिक आधार थिएन मसँग । त्यसैले जति उठ्यो, त्यति (१ लाख) दलित युवा सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष पुष्कर विकको हातबाट हस्तान्तरण गरेँ ।
आजको मितिसम्म कसैले गर्न नसकेको ‘अनौठो काम’ गरेको चाहिँ होइन ।
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य on January 2, 2017 .
← पहिलो दलित महिला एल डी ओ को मुख्य सचिव बन्ने धोको	दलितप्रति अनुदार सरकार →